Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mampifandray an'i Phnom Penh sy Bangkok amin'ny serivisy isan'andro avy any Dubai ny Emirates
Hifandraisan'i Emirates i Phnom Penh (PNH) sy Bangkok (BKK) miaraka amin'ny serivisy vaovao isan'andro natomboka ny 1 Jona 2019. Ny serivisy avy any Dubai ka hatrany Phnom Penh, amin'ny alàlan'ny Bangkok, dia hanome mpandeha mandeha eo anelanelan'ny renivohitra Kambodia sy Thailand. miaraka amin'ny safidin'ny sidina bebe kokoa. Ny mpitsangatsangana avy amin'ny firenena Aziatika atsimo atsinanana koa dia hankafy ny fidirana amin'ny tambajotran'i Emirates manerantany, miaraka amin'ny fifandraisana mihamitombo amin'ny toerana 150 mihoatra ny firenena sy faritany 86.
Ny serivisy vaovao dia hiara-miasa amin'ny fiaramanidina Emirates Boeing 777. Ny sidina mankany Phnom Penh dia hiala isan'andro amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Dubai (DXB) amin'ny 0845 ora ora ao an-toerana, toy ny EK370, ary tonga any Bangkok amin'ny 1815hrs. Ny sidina iray ihany dia hiala ao Bangkok amin'ny 2000hrs, alohan'ny hahatongavany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phnom Penh amin'ny 2125hrs. Amin'ny ampahan'ny fiverenana, ny sidina EK371 dia hiala ao Phnom Penh amin'ny 2320hrs, ary ho tonga ao Bangkok amin'ny 0040hrs ny ampitson'io. Avy eo dia hiainga ho any Dubai amin'ny 0225hrs, tonga amin'ny 0535hrs. Eo an-toerana ny fotoana rehetra.
Emirates dia nanompo an'i Kambôdza niaraka tamin'ny sidina nankany Phnom Penh hatramin'ny Jolay 2017, izay nitondra mpandeha 100,000 XNUMX mahery amin'ny làlana mankany amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha tanàna lehibe indrindra sy mandroso haingana azy ao Kambodza, i Phnom Penh dia mandray anjara betsaka amin'ny fitomboan'ny harinkarem-pirenena ary manohy mahita maso ny fitomboan'ny isan'ny mpizahatany vahiny. Ny rohy ara-barotra eo amin'i UAE, Kambodza ary Thailandy dia ho tohanana amin'ny serivisy ho an'ny entan'ny Emirates isan'andro amin'ny lalana iray ihany.
“Faly izahay manatsara ny serivisinay amin'ireo toerana malaza any Azia atsimo atsinanana ireo ary manolotra safidy bebe kokoa ho an'ireo mpandeha any Kambodza sy Thailand. Ireo mpandeha dia tsy hoe ampifandraisina mivantana amin'ny alàlan'ny serivisinay isan'andro fotsiny, fa hanana fidirana amin'ny zotra anatiny sy isam-paritra avy amin'ny firenena roa tonta amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka Emirates Bangkok Airways, Jetstar Pacific ary Jetstar Asia, ”hoy i Adnan Kazim, Emirates '. Filoham-pirenena lefitra misahana ny zokiolona, ​​drafitra stratejika, fanatsarana vola sy raharaham-pirenena.
"Nanambatra tamim-pireharehana ny Emira Arabo Mitambatra ho Emirà Kambodza i Emirates nanomboka ny taona 2017, ary manantena ny hiorina amin'ny fahombiazan'ity zotra ity amin'ny rohy vaovao amin'ny alàlan'ny Bangkok izahay. Ity serivisy ity dia hanome ny mpandeha avy any Kambodza fidirana amin'ny lalana mankany Dubai sy Emirates izay tambajotran'izao tontolo izao midadasika, ary koa manome safidy sy fahalalahana bebe kokoa ho an'ireo mpizahatany sy ireo olom-pireneny monina any ampitan-dranomasina hitety any Kambodza, anisan'izany ireo avy any Thailand. Izahay dia mikendry ny hanefa ny fangatahan'ny mpandeha mahasalama, ary koa hanome tombony ara-toekarena, amin'ny alàlan'ny fanomezana rohy an'habakabaka izay manohana ny fizahan-tany sy ny fitaterana entana, ”hoy hatrany i Kazim.
Phnom Penh no ivon-toekaren'i Kambodza ary nanohy nanatri-maso fiakarana ara-toekarena nisy taham-pivoarana ara-toekarena indroa tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny fivoarana vaovao hanohanana ny indostrian'ny fizahantany, ao anatin'izany ny hotely, trano fisakafoanana ary trano fandraisam-bahiny hafa dia miroborobo eraky ny tanàna. Trano misy mponina 1.5 tapitrisa, ny tanàna dia nandray tsara tamin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phnom Penh mihoatra ny 1.4 tapitrisa mpizahatany iraisam-pirenena tamin'ny 2017, tafakatra 21% izany tamin'ny taon-dasa. Zava-dehibe amin'ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenena ny toerana halehany, mandray 25% amin'ireo fahatongavan'ireo mpizahatany 5.6 tapitrisa any Kambôdza tamin'ny taona 2017. Tamin'io taona io dia mpizahatany 2.1 tapitrisa mahery no nitsidika an'i Kambodza avy any amin'ny firenena Azia atsimo atsinanana, anisan'izany i Thailand.
Emirates, fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy codeshare Bangkok Airways, Jetstar Asia ary Jetstar Pacific, dia hanome ny mpanjifa fifandraisana tsara sy fahaizana manamboatra zotra fitsangatsanganana izay misy toeran-kafa any Kambodza, Thailand ary firenena Azia atsimo atsinanana hafa.
Ny serivisy isan'andro eo anelanelan'i Dubai sy Phnom Penh, amin'ny alàlan'ny Bangkok, dia hameno ny serivisy mivantana dimy an'ny Emirates eo anelanelan'i Dubai sy Bangkok. Avy Bangkok, afaka misidina mivantana mankany Hong Kong amin'ny Emirates ihany koa ny mpandeha. Ankoatry ny renivohitra Thai, Emirates koa dia miasa sidina 14 isan-kerinandro eo anelanelan'ny Phuket sy Dubai amin'ny ririnina (sidina fito isan-kerinandro mandritra ny vanim-potoana fahavaratra).